UKUBEKA ITV NGAPHANDLE (IINGCEBISO ZETV ZANGAPHANDLE) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Ukubeka iTV ngaphandle (Iingcebiso zeTV zangaphandle)
Ukubeka iTV ngaphandle (Iingcebiso zeTV zangaphandle)
Nasi isikhokelo sethu sokubeka umabonwakude ngaphandle kubandakanya iintlobo zetv zangaphandle zokuthenga, iindawo ezivalekileyo zeTV, apho unyusa khona & ukucwangcisa inkqubo yesandi.
Ukongeza umabonwakude ngaphandle kwiyadi yakho kunokuba yindlela emangalisayo yokwandisa indawo yokuhlala yekhaya lakho kunye nokwandisa wena okanye iintsapho zakho. Ukubukela iimovie phantsi kweenkwenkwezi ebusuku kunokuba ngamava amnandi kubo bonke kwaye kukuvumela ukuba wenze iinkumbulo ezintle. Nangona kunjalo, ngaphambi kokucinga ngokubeka i-TV ngaphandle, kubalulekile ukuba wazi ukuba loluphi uhlobo lweTV engaphandle engenamanzi oyifunayo.
Umabonwakude ongaphandle okungangenwa
Sebenzisa iTV yangaphakathi
Ukuvalelwa kweTV ngaphandle
Ukukhetha indawo yokuNyusa iTV yakho yangaphandle
Iintambo ngokuchasene ne-Intanethi yeTV yakho yangaphandle
Inkqubo yeZandi zangaphandle zeTV
Ukufumana umabonwakude okwazi ukumelana nezinto kunye namandla otshabalalisayo emozulu lukhetho olufanelekileyo lofakelo lwangaphandle olusisigxina. Ezi TV zikhethekileyo zilwa nelanga ngemiboniso eqaqambe ngakumbi.
Yintoni ekufuneka uyijongile kwiTV yangaphandle yokuNgenaManzi:
mila kunis kunye nomtshato ka-ashton kutcher
Ngaphambi kokukhetha umabonwakude ongaphandle, kuya kufuneka wazi ukuba ufuna ukuyibeka phi. IiTV ezahlukeneyo zangaphandle zisebenza ngcono kwiindawo ezahlukeneyo, ezinje ngelanga elipheleleyo, ilanga elikhethekileyo, kunye nomthunzi.
Ukuqaqamba kwethelevishini kulinganiswa kwiiyunithi zokukhanya ezibizwa ngokuba zii ‘nits’, apho enye i-nit ilingana nekhandlela elinye. Ubuninzi beTV yakho, bhetele uya kuyenza ekukhanyeni kwelanga.
'Umlinganiso wokungafani' ngumahluko phakathi komfanekiso oqaqambileyo oveliswe ngumabonwakude, kunye nomfanekiso omnyama ongawubonisa. Ukuqhubekeka nokwenza nzima imicimbi, akukho ndlela esemgangathweni yokulinganisa umlinganiso wokuthelekisa, kwaye amanani anokukhohlisa. Eyona TV isetyenziswayo ngaphandle yenye enezinga eliphezulu 'lendalo' umahluko, kuba ezi ziya kuvelisa owona mfanekiso uphakamileyo uhambelana kakhulu nomfanekiso wokuqala. Uninzi lweeTV namhlanje zinomnye umlinganiso wokuthelekisa, obizwa ngokuba 'ngumlinganiso wokutshintsha okuguqukayo'. Esi sisekethe esihlala sijonga ukondla kwevidiyo kwaye silungelelanise ukukhanya njengoko kufuneka. Umlinganiso ophezulu wokuchasana awuyi kwenza umlinganiso ophantsi wendalo.
Njengengxowa zokulala, iithelevishini zangaphandle zikalwe ngamaqondo obushushu anokumelana nawo. Ukuba ujonge ukubukela umabonakude kwisitya esishushu ngobusuku busika obuneqhwa, kuyakufuneka ukhethe iTV ekalwe ngamaqondo obushushu abandayo. Kwelinye icala, ukuba uhlala kwindawo enesalathiso sobushushu obuphezulu, jonga iiTV ezinokumelana nobushushu ngaphandle kokonakalisa okanye zokubeka emngciphekweni umfanekiso.
Qinisekisa ukuba kude kunye naziphi na iintambo okanye izindlu nazo zikwimeko yemozulu, kuba ziya kubakho kwindawo efanayo nomabonakude wakho.
Ukuba awusebenzisi ikhabhathi yeTV, licebo elihle ukukhetha umabonakude onogada okanye ogqume kwigalelo nakwiziphumo. Oku kuya kuthintela uthuli, umungu kunye nezinambuzane ekufumaneni indlela yazo ngaphakathi kwaye zenze umonakalo.
Kumdlalo omkhulu okanye ukulala kolutsha, kuyalinga ukuhambisa iTV yakho yangaphakathi ngaphandle. Esi sisisombululo esifanelekileyo sangokuhlwa, ukuba unamandla ngokwaneleyo, ivolumu kunye nokukhuselwa kwizinto. Ukuphinda amava, kungcono ukhethe imeko yemozulu- nokuba ngumabonakude owenzelwe ngokukodwa ukuba usetyenziselwe ngaphandle, okanye ikhabhathi kamabonwakude ethintela imozulu.
Ukwenza igumbi elizinikeleyo okanye Ipatio evaliweyo zimbini iindlela ongakhetha kuzo zokusebenzisa iTV yangaphakathi. Nangona kunjalo, kunyanzelekile ukuba kuqinisekiswe ukuba akukho ukufuma okanye ukufuma kuvunyelwe kwisithuba esinokubangela iingxaki kwi-elektroniki. Eyona nto iphambili ku- # 1 xa usebenzisa i-elektroniki kukhuseleko, ke nceda uqiniseke ukuba usebenzisa i-elektroniki ezikalwe ngokohlobo lomsebenzi owufunayo.
Uyilo lwale patio yanamhlanje ngeTV ezimbini.
Ukugcina izinto zakho ze-elektroniki zifihliwe xa ungazisebenzisi kububulumko, ukukhuselwa kwizinto kunye namasela anethuba. Ikhabhathi yeTV okanye indawo ebiyelweyo inokutywinwa kwaye ingangenwa ngamanzi, kwaye isitshixo sinokufakwa ukhuseleko olongezelelekileyo.
Khetha ikhabhathi yangaphambi kokuyila, okanye ube nesiko elinye elakhelwe ukuhambelana nokuhombisa kwakho. Ukugquma uthuli olutyibilikayo olutyibilikayo okanye olumeka i-TV xa lungasetyenziswa luyafumaneka ukuze luthengwe. Ipatio egqunywe ngesiko enendawo yomlilo kunye neenkuni ngaphandle kweTV enesandi. Bona Okuninzi iintlobo zeepatios Apha.
Utshintsha njani igama lam lokugqibela kwi-texas
Nokuba umabonwakude oyilelwe ukumelana nezinto akanakubekwa naphina. Umabonwakude ovezwe kukukhanya kwelanga kunokwenzeka ukuba aphuhlise ubushushu ngexesha. Umabonwakude kufuneka abekwe kude kumgama ubuncinci obuyi-6 yeenyawo ukusuka kuwo nawuphi na umthombo wobushushu, njengeplane heater, igrill, umngxunya womlilo okanye i-chiminea.
I-carport, i-awning, intente, i-pergola, okanye i-gazebo zonke iindawo ezintle kumabonwakude wangaphandle ukuba umthombo wamandla uyafumaneka. Indawo enomthunzi, ejonge emantla iya kuthintela ilitha elinomsindo. Ukuba unesitiya esidinga ukunkcenkceshelwa, qiniseka ukuba umabonwakude akasemngciphekweni wokutshizwa - kuyafana nokubekwa kufutshane namabhafu ashushu okanye amachibi.
Ukuba unendawo yangaphandle egutyungelwe sisilingi esisigxina, kunokwenzeka ukuba ukonyusa umabonwakude ngokuthe ngqo apho. Abahlaziyi kunye nabanini beebar banokufumana eli liqhinga eliluncedo kakhulu, kuba banako ukunyusa iiTV ezininzi kwaye bavumele abathengi ukuba babeke iliso kumdlalo okanye kumdlalo wokugqibela wexesha behleli etafileni. Ukunyuka kwentaba akukhuthazwa ukuba ubukele ngakumbi, ngenxa yobunzima bentamo.
Udonga olukhoyo okanye ucingo olomeleleyo lwenza indawo efanelekileyo yokunyusa ithelevishini yangaphandle, ngaphandle kokufuna ulwakhiwo olongezelelekileyo. Nyusa ikhabhathi kamabonwakude kuqala, kwaye ulandelwe yiTV uqobo kunye nebar yesandi ukuba usebenzisa enye.
Ukuba akukho nanye kwezi zinto zisebenza kunye nokucwangciswa kwendawo yakho, kukho enye indlela. Unokufaka iposti (okanye iiposti) emhlabeni, kwaye uncamathisele iTV yakho kunye / okanye nekhabhathi kwisithuba. Olu khetho lukunika olona lubhetyebhetye ngokubekwa.
Ukhetho lokuba i-TV yakho ibe lukhuni okanye uhambe ngaphandle kwamacingo ichazwe zizixhobo zakho ezikhoyo, ukhetho olufumanekayo kwikhebula okanye umboneleli wesathelayithi, kunye nokukhetha kwakho.
Umabonwakude ngokwawo uya kufuna umthombo wamandla. Oku kuqala ngokuphuma, ekufuneka ibe sisiphazamiso soqhagamshelo lomhlaba okanye isiphatho seGFCI. Eziivenkile kulula ukuzibona kwaye zihlala zibonwa emakhitshini, kumagumbi okuhlambela, nangaphandle kweminyango - zombini zinokuvavanywa kunye neqhosha 'lokuseta kwakhona'.
Naziphi na iingcingo okanye iintambo ezidibanisa umabonwakude kwindawo ephumayo kufuneka zikhuselwe ekukhanyeni kwe-UV. Kukho iintambo ezilinganiselwe olu hlobo lokhuseleko, okanye ungasebenzisa i-conduit okanye umbhobho okalwe ngaphandle.
Inkqubo enentambo iya kuthembeka ngakumbi kunenkqubo engenazingcingo, kodwa inkqubo engenazingcingo ihlala ilula ukuseta. Abanye abantu bakhetha ukuqala ngokuseta ngaphandle kwamacingo kwaye ukuba ukuthembeka ngumcimbi, tshintshela kwi-wired.
Izithethi kumabonakude ophakathi zenzelwe ukugcwalisa igumbi elinesandi, zisebenzisa isilingi kunye neendonga njengezinto zokumamela. Ngaphandle, ezi zakhiwo azihlali zikhona, ke ukufumana isandi esisemgangathweni kungafuna ubuchule.
Ibar yesandi lolona khetho lufanelekileyo lokuqinisekisa ukuba umdlalo unokuviwa ngomsindo wengingqi, ukudlula kwezithuthi, okanye abantwana abadlala ngasemva. Ibar yesandi inokuxhonywa ngokuthe ngqo ngaphantsi komabonwakude. Ukuvumela oku, khetha ikhabhathi ye-TV enendawo yesandi esingaphantsi.
Inkqubo yesandi esingqonge ikwayindlela yokukhetha ukuntywila, kodwa ngaphandle kokuba indawo yakho yokuhlala ichazwe kakuhle kwaye isigxina, kuya kuba nzima ukufikelela kumava alungeleleneyo omsindo kuwo wonke umntu obukeleyo. Oku kuyakufuna indawo yokuhlala yezithethi, kunye nokuqhuba iintambo ezininzi. Ibar yesandi ikwavumela umabonakude ongaphandle ukuba usetyenziswe njengomthombo womculo, uyenze ibe bhetyebhetye ngakumbi kwaye inyuse ixabiso lotyalo-mali kwiziko lokuzonwabisa elingaphandle.
Ndwendwela eli phepha legalari ukuze ubone okunxulumene noko izimvo zangaphandle zeTV .
yintoni isipho seminyaka engama-50
Isimbozo seTV sangaphandle esingangenwa ngamanzi 52 to 55 inche… $ 27.97$ 31.97 umthengisi ogqibelele (7696) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
nini ukuthumela izimemo zeshawari yomtshato
I-SunBriteTV SE 43-Inch yemozulu ngaphandle ... $ 1599.00$ 2199.00 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-191 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Quictent 10x10 ft Gazebo eneMosquito Netting… $ 244,99 umthengisi ogqibelele (324) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Amplified HD esendlwini ye-TV ye-Antenna Lon… $ 27.99 umthengisi ogqibelele (1329) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
wenzani umcwangcisi womtshato
iziqithi zebar zasekhitshini
iilokhwe zomtshato ezipinki ziyathengiswa
izimvo zangasese zangoku
amagama amabini aphakathi emva komtshato
yintoni uthando iivesi zebhayibhile